ငါ့ကို ပြန်ပို့ မယ်ထင်ပြီး ငါလိုက် လာတာ ငါက အိမ်ကို ပြန်ချင်တာလို့ ငိုပြီး ပြောနေတဲ့ ဦးလေးကြီး - Real News
ငါ့ကို ပြန်ပို့ မယ်ထင်ပြီး ငါလိုက် လာတာ ငါက အိမ်ကို ပြန်ချင်တာလို့ ငိုပြီး ပြောနေတဲ့ ဦးလေးကြီး
Comments Off on ငါ့ကို ပြန်ပို့ မယ်ထင်ပြီး ငါလိုက် လာတာ ငါက အိမ်ကို ပြန်ချင်တာလို့ ငိုပြီး ပြောနေတဲ့ ဦးလေးကြီး
ဦးလေး မိသားစုနဲ့ အမြန်ဆုံးအဆက်သွယ်ပြန်ရအောင် ကျေးဇူးပြု ၍ Share လုပ်ပေးကြပါဦးနော်
ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့မန်းဇိုင်းရွာ လဲ ပြောတယ် ဆားမော်ကုန်း ရွာ တစ်ခုလဲ ထပ် ပြောပါတယ် နာမည်က ဦးဆောင်ဖရန့်လို့ပြောပါတယ် ဦးလေး ပြောတဲ့ လေသံနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးရေးထားရှင့်!
ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့် ရောက်လာတာ မသိပေမယ့် မေးလို့ မရပေမယ့် ရွာပြန်မယ် မိုးကောင်းပြန်ချင်တယ်တော့ မကြာခန ပြောပါတယ် ဦးလေး ပြောပုံအရ သူ ခုလို သွားနေ တာ(3)လလောက်ရှိပါပြီတဲ့
မိုးကောင်း ကိုပြန်မလို့လမ်းလျောက်ပြန်တာတဲ့ မှတ်ပုံတင်လဲသိမ်းတယ် ကားလဲပေးမစီးဘူး ပိုက်ဆံလဲ ယူသွားတယ် လို့ပြောနေပါတယ်
နောက်ပြီးဦးလေးက နားလဲ သိပ်မကြား ဖြစ်ပြီးမျက်စိက တစ်ဖက်ပဲကောင်းကောင်းမြင်ပုံရပါတယ်
ဒီနေ့လွိုင်ကော်ဆေးရုံကြီးမှာ လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု့ ခံယူတုန်း ငါ့ကို ပြန်ပို့ မယ်ထင်ပြီး ငါလိုက် လာတာတဲ့ ငါမိုးကောင်းပြန်ချင်တာ ပြန်မပို့ ဘူးဒီကို လာပို့ တယ် နင်တို့ မပို့ ရင်ပြောပါ….ငါလမ်းလျောက်ပြန်မယ်
ငါ အိမ်ကိုပြန်ချင်တာတဲ့ ငိုပြီး ပြောနေပါတယ် ဒီPostကိုမြင် ပြီ မိသားစုဝင်များ ကို ဆက်သွယ်ကူပေးကြပါဦးနော!
လွိုင်ကော် ဆေးရုံကြီးမှာ လိုအပ်တဲ့ ဆေးကုသမှု့ ခံယူ ပြီး ဆေးရုံတက်ရန် မလိုအပ်သည့်အတွက် ယခုလောလောဆယ် ဦးလေးကို မိသားစုများ နဲ့ဆက်သွယ်နေတုန်းကာလ၌ကယားပြည်နယ် ဘိုးဘွားရိပ်သာ တွင် ထားရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်!
ထားစရာနေစရာမရှိ ချိန်မှာ နေစရိတ်စားစရိတ်တာဝန်ယူ ကူညီပေးတဲ့ ပြည်နယ်ဘိုးဘွားရိပ်သာမှ တာဝန်ရှိ လူကြီမင်းများအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဦးလေးအားဂရုတစိုက် ဆေးကုသမှု့ ပေးပြီး တစ်ကိုယ်ရည်သန့် ရှင်းရေးပြု လုပ်ပေးပါသော လွိုင်ကော်ဆေးရုံကြီးမှ တာဝန်ကျ ဆရာ/ဆရာမများအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ambulanceကား အကူညီပေးပါသောလွိုင်ကော်မြို့ နယ် မီးသတ် ဦးစီးဌာန အား
Roselin Ei Ei
ဦးလေး မိသားစုနဲ့ အမွနျဆုံးအဆကျသှယျပွနျရအောငျ ကြေးဇူးပွု ၍ Share လုပျပေးကွပါဦးနျော
ကခငျြပွညျနယျ မိုးကောငျးမွို့မနျးဇိုငျးရှာ လဲ ပွောတယျ ဆားမျောကုနျး ရှာ တဈခုလဲ ထပျ ပွောပါတယျ နာမညျက ဦးဆောငျဖရနျ့လို့ပွောပါတယျ ဦးလေး ပွောတဲ့ လသေံနဲ့ အနီးစပျဆုံးရေးထားရှငျ့
ဘယျလို အကွောငျးကွောငျ့ ရောကျလာတာ မသိပမေယျ့ မေးလို့ မရပမေယျ့ ရှာပွနျမယျ မိုးကောငျးပွနျခငျြတယျတော့ မကွာခန ပွောပါတယျ ဦးလေး ပွောပုံအရ သူ ခုလို သှားနေ တာ(3)လလောကျရှိပါပွီတဲ့
မိုးကောငျး ကိုပွနျမလို့လမျးလြောကျပွနျတာတဲ့ မှတျပုံတငျလဲသိမျးတယျ ကားလဲပေးမစီးဘူး ပိုကျဆံလဲ ယူသှားတယျ လို့ပွောနပေါတယ
နောကျပွီးဦးလေးက နားလဲ သိပျမကွား ဖွဈပွီးမကျြစိက တဈဖကျပဲကောငျးကောငျးမွငျပုံရပါတယျ
ဒီနလှေို့ငျကျောဆေးရုံကွီးမှာ လိုအပျတဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု့ ခံယူတုနျး ငါ့ကို ပွနျပို့ မယျထငျပွီး ငါလိုကျ လာတာတဲ့ ငါမိုးကောငျးပွနျခငျြတာ ပွနျမပို့ ဘူးဒီကို လာပို့ တယျ နငျတို့ မပို့ ရငျပွောပါ….ငါလမျးလြောကျပွနျမယျ
ငါ အိမျကိုပွနျခငျြတာတဲ့ ငိုပွီး ပွောနပေါတယျ ဒီPostကိုမွငျ ပွီ မိသားစုဝငျမြား ကို ဆကျသှယျကူပေးကွပါဦးနော!
လှိုငျကျော ဆေးရုံကွီးမှာ လိုအပျတဲ့ ဆေးကုသမှု့ ခံယူ ပွီး ဆေးရုံတကျရနျ မလိုအပျသညျ့အတှကျ ယခုလောလောဆယျ ဦးလေးကို မိသားစုမြား နဲ့ဆကျသှယျနတေုနျးကာလ၌ကယားပွညျနယျ ဘိုးဘှားရိပျသာ တှငျ ထားရှိသှားမှာ ဖွဈပါတယျ!
ထားစရာနစေရာမရှိ ခြိနျမှာ နစေရိတျစားစရိတျတာဝနျယူ ကူညီပေးတဲ့ ပွညျနယျဘိုးဘှားရိပျသာမှ တာဝနျရှိ လူကွီမငျးမြားအား အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ!
ဦးလေးအားဂရုတစိုကျ ဆေးကုသမှု့ ပေးပွီး တဈကိုယျရညျသနျ့ ရှငျးရေးပွု လုပျပေးပါသော လှိုငျကျောဆေးရုံကွီးမှ တာဝနျကြ ဆရာ/ဆရာမမြားအား အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ
Ambulanceကား အကူညီပေးပါသောလှိုငျကျောမွို့ နယျ မီးသတျ ဦးစီးဌာန အား